Umatshini wokucoca oVulayo wokuPrinta - Abavelisi boMatshini abaShukumayo bokuPrinta, abaXhasi
Umatshini wokugqiba ombane onesigqubuthelo sengxolo sasimahla
Ukusetyenziswa kunye neNzuzo
Iinkqubo zokuwiswa kwethambeka lokungcangcazela livelisa isenzo sokususa ngokushukumisa isitya sokuqhubekeka (ibhafu yokugqiba) ngesantya esiphezulu,
kubangela ukuba imithombo yeendaba ewayo kunye neenxalenye zikhuhlane. Eli nyathelo lokukhuhla lichaphazela ngokuchanekileyo iinxalenye ukususa i-burrs.
Ishafti enezisindo ezijikelezayo ezixhonywe ebhafini ivelisa isenzo sokugungqa.
Oomatshini abasebenza ngokurhabaxa kunye neenkqubo zokugqiba zivelisa isenzo sokusika esicoceke kakhulu.
Basusa izinto ezipokothweni nasezikhepheni kunye nangaphakathi kwebele, ezingenakwenziwa kwibhokisi yokuwisa,
ke zinokusetyenziselwa izinto ezibuthathaka kakhulu okanye eziyinkimbinkimbi. Ngesantya esiphezulu kunye ngesibetho esifutshane,
Banokuqhuba iindawo ezinkulu ezinkulu ngaphandle kokonakala. Ukuphakama kwamaphiko amakhulu kunye nokuhamba komhlaba kuhlala kuqhutywa kwezi nkqubo.
Iinkqubo zokugqibezela ngokushukumayo nazo ziboleka ukuba zisebenze ngokulula.
Banokuzenzekelayo ngokuzenzekelayo ekusebenzeni kokuhamba okanye basebenzise njengesiseko sebatch.
Isenzo sesokujikeleza okuncinci ngesantya esiphezulu kwaye ke sinamandla amakhulu, kodwa kubangela uxinzelelo kumalungu
Iimodeli ezahlukeneyo kunye nobuchwephesha
Umzekelo Umthamo Amandla eMoto
Isantya seemoto DB Ubunzima (kg) Ubungakanani (L×W×H) mm
Unyango oluphezulu lwe-Holdwin lonyango lokugqibezela oomatshini bokuhambisa isitya ngaphandle kwengxolo
Umatshini osomisa i-centrifugal dryer • Isomisi somoya esishushu secentrifugal
Ishushu isomisi se-centrifugal dryer sisetyenziselwa ukuqinisekisa ukuba iindawo azinabala kwaye i-corrosion ayomile, kulandela ukwenziwa kwezinto ezimanzi,
ebaluleke kakhulu ukuba iinxalenye zipeyintwe njengokugqibela kokusebenza, ezifanelekileyo kakhulu ekuqhubeni iinxalenye ezincinci.
Ukuqwayita ngumoya oshushu kunye necavum
Ibhasikithi yangaphakathi ye-centrifugal eyenziwe ngentsimbi engenasici enemingxunya, amanzi asuswe kumphezulu wamalungu ngamandla e-centrifugal anyusa ukusebenza ngokukuko.
Umoya ofudumeleyo unciphisa ixesha lokomisa kwaye umphunga umphunga kwaye ukhusela iindawo kumhlwa kunye nokubola.
Ulawulo lwesantya esiguqukayo se-inverter sokhetho oluninzi lwenkqubo.
Ukukhusela isixhobo kuvala umbane ngokuzenzekelayo xa kusetyenzwa kugqityiwe okanye kuvulwa isiciko.
HOLDWIN Industrial Centrifugal Dehydrator isomisi seoyile sokususa umatshini 70L
Umzi mveliso wezamanzi wamanzi
Isetyenziselwa ukuqinisekisa ukuba iindawo azinabala kwaye umhlwa awusomi, kulandela ukugqitywa kokumanzi, okubaluleke kakhulu ukuba iinxalenye zipeyintwe okokugqibela
Eyona ilungele ukuqhubekekisa iinxalenye ezincinci.
Ukucoca umoya oshushu kunye ne-cavnum. Ngaphakathi kwibhasikithi ye-centrifugal eyenziwe ngentsimbi engenasici enemingxunya,
amanzi asuswe kumphezulu wamalungu ngamandla e-centrifugal anyusa ukusebenza ngokukuko.
Ukuhamba okupolishiweyo okuzenzekelayo
I-polisher inokusetyenziswa ngokubanzi kumashishini ahlukeneyo kwizinyithi, izinto ezingezizo zesinyithi ezixubusha iindawo zokunyathela
iindawo ngomatshini, eyahlulayo kunye nasekuqiniseni, h
yitya unyango kunye nezinye iindawo, ukujija, ukuqaqamba, ipolishi kunye nezinye iinkqubo.
Ngokukodwa iimilo ezintsonkothileyo, i-burrs enkulu ye-oxide enesikhumba esikhulayo, kunye namalungu amancinci abonelela ngesixhobo esihle sokulungisa.
Zenzekelayo bokushicilela umatshini wokucoca kunye isahluli
1.I-Vortex polisher isebenzisa umgaqo-nkqubo wokuqala wokuhamba kwe-vortex, indawo yokusebenza kunye nelitye lokusila ukufezekisa ukukhawulelana ngokwaneleyo, ukukhanya kokukhanya okuphezulu, ukuphucula ukusebenza amaxesha angama-15 ukuya kuma-30.
2. Vortex wokucoca motor turntable for iimoto, kusenokufuneka ukuba ukhethe ucofo ngokukhawuleza; Isibali-xesha ngomboniso wedijithali, ekulula ukusebenziseka, unokuhlala uyibona imeko yomsebenzi.
3. Vortex wokucoca turntable itanki esisigxina kunye igcwele irabha lyu, kunye umsantsa phakathi turntable adjustable, banxibe ukumelana kunye nobomi inkonzo ende.
Umatshini ozenzekelayo we-Nail osebenza kakuhle kwi-Barral wokucoca umatshini
Ubungakanani bayo bunokwahlulwa kwiilitha ezili-150, iilitha ezingama-300 kunye neelitha ezingama-600 zokubalulwa kwentsimbi, intsimbi, ubhedu, i-zinc, i-aluminium,
ingxubevange wemagniziyam kunye nezinye izinto bexhentsa, bephosa, bephosa, nasekuqiniseni, ucingo, iiseramikhi, jade, nekorale, nentlaka zokwenziwa, iiplastiki,
iiseramikhi kunye nezinye izinto ezibonakalayo umphezulu wokucoca, ukubetha, ukususa i-burr, i-rust, ukugaya okungagungqiyo, ukugaya ngokuchanekileyo, ukucola i-gloss, ukuya kwifilimu emnyama, ukugaya okumnyama kunye nokugaya okuhle, ukucoca i-chamfering
Zenzekelayo Rotary umatshini wokucoca
Ukulungele umsebenzi omncinci wokugaya kunye nokusebenza kokucoca, ungasusa ngokukhawuleza i-chamfer,
ukudlala i-burr ukugaya kunye ne-polishing, ikwalungele ukususwa kwe-silica gel flash.
1, Iqhutywa iimoto tye
Inkqubo ye-2, uick yokukhululwa kokukhawulezisa ivumela ukutshintsha kwesikrini ngokukhawuleza.
Isikrini esino-3, esinokufakwa singenziwa ngentsimbi engenasiphelo eqinile kwaye ingenakumhlwa okanye isongelwe nge-PU ukuphelisa ukungonakali.
i-ultrasonic vibro oomatshini bokuphrinta
Isicelo esingumatshini esingcangcazelayo sisenza izinto ezenziwa ngesinyithi, izinyithi ezingenantsimbi kunye nesinyithi. Ngaphandle koko,
iinjineli zisebenzisa inkqubo ye-burr kunye nokususwa kwerusi, iinxalenye zentsimbi zijikeleze ukujikeleza kunye nesipili. Ukwengeza,
Le nkqubo ithandwa ingakumbi wokucoca iinxalenye kunye entsonkothileyo komhlaba geometry kunye umphezulu concave.
Emva kokuqhubekeka, akukho monakalo kumalungu angaphezulu komhlaba kwaye akukho nefuthe kumacandelo omlinganiso.
Kwakhona, umphezulu woburhabaxa wamalungu unokuphucula i-1-2 degree. Umatshini wokungcangcazela ulungele ukugqiba amancinci ukuya kubukhulu obuphakathi kwinxalenye enkulu yebhetshi.
√ Ukutyekela nzulu kwenkqubo yokuqhubekeka.
√ Isango lokwahlula-hlula ngesandla okanye ukhetho lwokwahlulwa komoya olwenziwe ngumoya.
√ Umsebenzi olungileyo kunye nokunciphisa iindleko zomsebenzi
√ Amanqanaba okulungelelanisa ukungalingani avumela ukomelela kokugqiba okwahlukileyo.
√ Ukunxiba okunganyangekiyo okwenziwe kumgangatho ophezulu we-PU.
√ Imithombo yeendaba ethula umthwalo nge-drain edibeneyo.
Stone Vibratory umatshini wokucoca
Uhlobo olude lwamatye okuGqibela ukuSebenzisa umatshini wokuSebenzisa: Ukwenza iRadiusing, Deburring, Derusting, Surface smoothing, Degreasing, Ukucoca ngaphambi kokufaka okanye ukwenza ikhemistri, ukugqiba, ukupolisha. Iparameters zobugcisa: Umthamo wemodeli (L) Ubungakanani beLining (mm) Ubunzima obungenanto (kg) Injini (kW) Ubungakanani beTub (mm) L × W ubungakanani bangaphandle (mm) L × W × H HST240 240 20 450 2 × 1.1 690 × 672 1880 I-880 × 920 HST500 500 22 1200 2 × 2.2 1310 × 672 2870 × 880 × 920 HST750 750 22 1600 2 × 5.0 2 ...
Umatshini wokucoca iMagnetic kwiindawo ezincinci zesinyithi
Umatshini wokucoca ngemagnethi-ukukhupha iindawo ezincinci zokucoca ngokuchanekileyo kuyamangalisa.
Umgaqo womatshini wokucoca umazibuthe: Umatshini wokucoca iMagnetic sisixhobo esitsha.
Ukusetyenziswa kotshintsho oluphezulu lwamandla ombane ophakamileyo, ukuhambisa imithombo yeendaba encinci yokugaya (ubume beentsimbi ezingenanto).
kukhokelela kukuhamba kwesantya esiphezulu, ukujika, ukushukuma kunye nezinye iintshukumo.
ngaphezulu kokusebenza kwe-workpiece. nakuphi na ukungqubana okungalinganiyo komhlaba ukufikelela kwipolishi. ukucoceka.ukususwa kokugaya ngokuchanekileyo kunye nezinye iziphumo